Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Bulshada oo la shiray jaaliyadda S.Ogadenya ee Edmonton/Canada
Hogaanka Arimaha Abaabulka iyo Bulshada oo la shiray jaaliyadda S.Ogadenya ee Edmonton/Canada
Posted by ONA Admin	/ July 19, 2012
Madaxa Hogaanka abaabulka iyo Arimaha Bulshada ee JWXO Maxamed Cabdi yaasiin[diirane] oo beryahanba socdaal ku marayey jaaliyaadka ogaadeeniya ee North America ayaa shirkiisii kowaad ku qabtay magaalada Edmonton. Hogaanka ayaa shirar kale ka sii wadi doona magaalada Edmonton iyo meelo ka mid ah gobolkan Alberta. Hogaamiyuhu wuxuu kulamo kala duwan la yeelan doonaa guud ahaan jaaliyaadka soomaaliyeed gaar ahaan soomaalida Ogadeeniya.
Shirkii 1aad oo ahaa mid aad u balaadhan ayaa waxaa lagu qabtay Nova Hotel oo ku yaala Edmonton,shirkaas oo lagu martiqaaday dhamaan jaaliyada soomaaliyeed ee degen magaalada Edmonton ayaa waxaa ka soo qaybgalay dad aad u tiro badan oo ka kala socday bulshaweynta soomaaliyeed ee edmonton dagan.
Shirka waxaa furay gudoomiyaha jaaliyada ogaadeeniya cumar xirsi,cumar wuxuu mahadnaq balaadhan u soo jeediyey jaaliyada soomaaliyeed ee ka soo qayb galayshirkan kadib waxaa hadalka lagu soo dhaweeyey isuduwaha jaaliyadaha ogaadeeniya ee canada mudane maxamed macalin oo halkaa kasoo jeediyey hadalo qiimo sare leh kuwaasoo isugu jiray wacyi gelin, guubaabo iyo mahadnaq balaadhan oo uu u soo jeediyey jaaliyada soomaaliyeed ee shirkan ka soo qayb galay.
Kadib waxaa hadalka lagu soo wareejiyey madaxa hogaanka abaabulka iyo Arimaha bulshada mudane maxamed cabdi yaasiin [diirane]. Hogaanku wuxuu hadalkiisii ku bilaabay aayado quraan ah.mudane diirane wuxuu si qoto dheer uga waramay Halgankii dheeraa ee loo soo galay Xoreynta wadanka Ogaadeeniya laga soo bilaabo halgankii Axmed gurey iyo ka horba.
Hogaanku wuxuu si fiican uga waramay geesinimadii uu shacabka soomaalida ogaadeeniya ula dagaalmay gumaysiga xabashida sanado aad u badan,isla markaas wuxuu hogaanku shirkan u sheegay in maanta ONLF iyo shacbigeedu leeyihiin xoogii iyo aqoontii ay dalkooda ku xoreyn lahaayeen.
Wuxuu kaloo hogaanku maamulada soomaaliyeed u sheegay, haday joojin waayaan dhibaatada ay ku hayaan kuna soo hayeen halganka mudada dheer in la joogo wakhtigii lagula xisaabtami lahaa maamulada ka jira soomaaliya wixii ay geystaan ee danbe.
Hogaanku wuxuu baaq u diray aduunka waynaha kale wuxuuna yiri hadii la tixgelin waayo xoriyada wadanka ogaadeeniya in ayna jireynin xasilooni ka dhacda Geeska Africa iyo khayraadka ogaadeeniya oo la soo saaro.
Shirka waxaa iyana ka hadlay oo lagu soo dhaweeyey aqoon yahano iyo odayaal kale, Aqoonyahanada waxaa ka mid ahaa Dr.maxamuud ugaas oo soo bandhigay warbixin aad muhiim u ah oo ka waramaysa taariikhda iyo khayraadka wadanka Ogaadeeniya leeyahay. Dr maxamuud oo ka socday Ogaden Human Right ayaa wuxuun ka hadlay heshiisyadii khiyaamada ahaa ee reer galbeedka iyo Ethoipia marar badan is weydaarsadeen iyo wixii la mid ahaa.
Shirkan qiimaha iyo qaayaha badan waxaa xidhiidhinaayey Maxamed Aadan dubad wuxuuna ku soo dhamaaday guul iyo farxad.